Ogaden News Agency (ONA) – QOL – Dagaalo cusub iyo go’aan ka dhan ah shacabka oo looga aargoosanayo
QOL – Dagaalo cusub iyo go’aan ka dhan ah shacabka oo looga aargoosanayo
Waxay ka mid tahay dhaqanka gumaysiga iyo kuwa u adeega marka ay hakin kari waayaan halganka hubaysan inuu dadweynaha kaga aargoosto guuldarada soo gaadha ciidamadiisa iyo maxaysatada la socota.
Shabakadda Qorahay ayaa wararkii ugu dambeeyay ay ka soo tabiso Ogadenya waxay ku sheegtay inuu dagaal xoogan ka dhacay aaga Jigjiga iyo in maxaysatadii Hawaarin la faray inay fuliyaan falal aargoosi ah. Warbixinadaa ayaa ahaa sidan;
13kii bishan ayuu cutub CWXO ka mid ah fuliyeen weerar qorshaysan oo lagu qaaday ciidanka gumaysiga, oo fadhigiisu ahaa meesha lagu magacaabo Shabeeley oo deegaanada Jigjiga hoos yimaada oo u jirta magaalada 15-20Km.
Sida ay wararku ku soo gaadheen dagaalkaas oo ahaa weerara ay CWXO Askarta Tigreega ku qadeen wuxuu bilowday abaarihii 11:00 barqinimo xiliga Geeska Afrika wuxuuna socday mudo kooban waxaana gumaysiga lagaga gubaya 2 Gaadhi oo Uraalo ah, ciidankii saaraa & qalabkii ay wateen oo aan waxab ka badbaadin, sidoo kale waxaa cadowga loo gaysatya khasaare balaadhan oo dhinac walba ah waxaana laga furtaya hub & saanad kale oo muhiim ah.
Wararka kale laga helayo meelo kala duwan oo Ogadaeenya ayaa sheegaya in ay Jigjiga yimaadeen qaar ka mid ah maamul ku sheegyada maqaar saarka ah ee Gobolada Ogaadeenya gumaysigu u dhoodhoobay, laba todobaad ka hor ayaa magaalada Jigjiga waxaa shir loogu qabtaya kuwa ciidamada gumaysiga Itoobiya xabada looga dhigo ee Hawaarainta waxaana lagu amraya in ay fuliyaan qorsheyaw & go’aano ay Saraakiisha Tigreegu soo hor dhigeen.
Awaamiirta Hawaarinta la siiyaay ayaa la sheegayaa in ay ugu horeysay sidii shacabka Soomaalidda Ogaadeenya waxyyeelooyinka & cadaadiskii ay horey u qabeen loogu kordhin lahaa, waajibaadkii Hawaarinta la siiyaya isla markaasna ay ciidamada Tigreegu ah hogaaminayaan waxaa ka dhashay xasuuqa balaadhan ee Gobolka Jarar ka socda kaas oo ilaa hada aan joogsanin dad faro badana lagu laayay qaaraklean lagu xidhxidhay iyadoo dad badana aan raq & ruux meel ay ku dambeeteen la arag.
Hadaba si dhibaatda & dulmiga shacabka Soomalidda Ogaadeenya lagu hayo loo sii xoojiyo waxaa la isugu yeedhay maamul ku sheegyada maqaar saarka ah ee loo wakiishay in ay dhiiga shacabkooda cabbaan, waxaana shir loogu qabanayaa Magaalada Jigjiga kaas oo barito furmi doona isla markaasna ay wakiilada gumaysigu ku sheegeen qiimayn balse la filayo sidii gumaysiga caadada u ahayd in daabdhilifyada lagu amri doono in ay ka qayb qaataan xasuuqa arxan darada ah ee shacabka dhibaatadu daashatay lagu hayo kaas oo la doonayo in dhamaan shacabka Soomaalidda Ogaadeenya lagu gumaado.
waxaa la yidhi waagii hore diinku ma lahayn qolofta ku dadan, saas darteed waxa uu ahaa hilib banaan yaal.
maalin ayaa dugaag oo dhan waxay ku heshiiyeen inay cunaan diinka,
shimbir ayaa u sheegtay oo tidhi: diinaw dugaag oo dhan ayaa kuu tashaday berrina way ku cuni doonaan !
waxa uu waydiiyey ” alla wayne miyuu ku jirey tashiga iga dhanka ah? ”
” maya ” ayay ku jawaabtay,
kolkaas ayuu yidhi ” iska dhaaf hadaba waxba ima yeeli karaane ”
cadawgiina waxa ay u yimaadeen isagoo qolof aysan ku ogayn leh. …
Ka adkaanay tigree dabadhilifna wuuxigi inasha alah